အချစ် Archives - MinSayYar
မစွန့်လွှတ်နိုင်လို့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပေမယ့်လဲ အရင်လိုပြန်ယုံကြည်နိုင်ဖို့တော့ ခက်တယ် …
မစွန့်လွှတ်နိုင်လို့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပေမယ့်လဲ အရင်လိုပြန်ယုံကြည်နိုင်ဖို့တော့ ခက်တယ် … အမှားတစ်ခုကို ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီအမှားတွေကို သင်ပုန်းချေလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်က မစွန့်လွှတ်နိုင်လို့ခွင့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့အခါတွေရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲ ကတိတွေပေးနေပေးနေ အရင်လို ယုံကြည်ဖို့တော့ ခက်လွန်းတယ် … နောက်တစ်ခါသာထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေက ညတွေနက်စေခဲ့သလို တစ်ခါသေဖူးတဲ့သူက နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သေရမှာ ကြောက်နေတဲ့ခံစားချက်ကြီးလေ… ဖြစ်နိုင်ရင် သူပြောင်းလဲလာပါလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ကျွန်မ ယုံကြည်ချင်မိတယ် … ခက်တာက ယုံကြည်မှုဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးပြန်တည်ဆောက်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူးလေ … အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့လို့မရဘူးလားတဲ့ ကျွန်မက ပိုလို့တောင် မမှတ်မိချင်သေးတယ် အဲ့ဒီအတိတ်ကို ပြန်မှတ်မိတဲ့အခါတိုင်း အခုဖြစ်နေသလိုမျိုးကို ထပ်ပြီးနာကျင်ရတာလေ … နောက်တစ်ကြိမ်သာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးဟာ သူအနားမှာရှိနေပေမယ့် သူ့ကို မယုံရဲတော့ပါပဲ … ကတိတွေပေးနေပေမယ့် အရင်ကလဲ ကတိတွေပေးဖူးတာပဲဆိုတဲ့ အသိတွေက ကြီးစိုးနေတယ် မယုံကြည်တော့ရင် […]
(7)ရက် သားသမီးတွေရဲ့ တစ်နှစ်စာအချစ်ရေးက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ…?
စာမမှန်ပါက အောက်တွင် Unicode Version ဖြင့်ဖတ်ရန် (7) ရက် သားသမီးလေးတွေရဲ့ အချစ်ရေး ဗေဒင်ကို Gleaning မှ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော် …။ (7) ရက်သားသမီးများအားလုံး အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဟု ဖွားများ ဗုဒ္ဒဟူးကိုပဲ ကြည့်ပါ …။ တနင်္ဂနွေ ၊ သောကြာ သားသမီးတွေကတော့… အချစ်ရေး ကံမကောင်းဘူး ကိုယ်မျှော်လင့် ထားသလို ဖြစ်မလာတတ်ဘူး။ ကိုယ် ထင်ထားတာ နဲ့ လွဲသွားရတတ်ပါတယ် …။ တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဒဟူး သား သမီးတွေကတော့… ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ပြီး ပြတ်မလိုလိုနဲ့ နောက်တော့ ပြန်အဆင်ပြေသွားရ တတ်ပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်အလိုမကျ ဖြစ်ရတာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ် …။ အင်္ဂါ […]
အိမ်မပိုင်တ့ဲ မိန်းကလေးကို ချစ်သူရွေးမယ်ဆိုရင်
မင်း ဒါလေး ခနလောက် နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါအုးံ …၊ချစ်သူဖြစ်ပီး 1 လလောက်က အရမ်းကို အေးတိအေးဆက် နိုင်လွန်းတဲ့ ဂျိုသားမလေးတွေပေါ့အဲ့ ဒဏ်လေးကို မင်းခံနိုင်ပီလား …?တိုင်ပင်ရိုက်နေရင်းနဲ့ အဖေသို့မဟုတ် အမေခေါ်လို့ နုတ်မဆက်ပဲ လိုင်းပေါ်က ဆင်းသွာရင် မင်းစိတ်ထဲ ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေ ထွက်လာမှာ အသေချာပဲ အဲ့ဒါလေးရော သည်းခံနိုင်ပီလား …? အရမ်းလွမ်းလို့ ကိုက ဖုန်းခေါ်ရင်တောင် အဖေမေ ရှိလို့ မကိုင်ရဲတဲ့ အခိုက်တန့် အိမ်မပိုင်တဲ့ ဂျိုသားမလေးတိုင်းမှာ ရှိတယ် ။ ဖုန်းပြော ရပြီဆိုလဲ မဟုတ်တာ လုပ်ထားသလို ခိုးပြောရတာ မင်းချစ် နိုင်တာ သေချ ာတယ်ပေါ့ ။ သူများ အတွဲတွေ လူသိရှင်ကြား Anniversary တွေလုပ်လို့ ကိုယ်တွေလုပ်ရမယ် ထင်နေလား အကောင့်ထဲ […]
19th December 2020 Editor
အနေဝေးတဲ့ ချစ်သူတွေ နှလုံးသားချင်းပါ ဝေးသွားနိုင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းများ
အနေဝေးတဲ့ ချစ်သူတွေ နှလုံးသားချင်းပါ ဝေးသွားနိုင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းများ အနေဝေးရင် သွေးအေးတယ်ဆိုတာကို တကယ်လက်ခံကြလား။ အနေဝေးနေတဲ့ ချစ်သူတွေအနေနဲ့ အမြဲတမ်း အဆက်အသွယ်တွေမပြတ်ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပြီး သွေးမအေးသွားအောင် နေ့တိုင်းဆက်သွယ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ အနေဝေးရင် သွေးအေးသွားတတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ပါ။ ဒီလိုအချက်တွေကြောင့် အနေဝေးတဲ့ ချစ်သူတွေ တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာသွားရစေတတ်ပါတယ်။ (၁) ကောင်းမွန်တဲ့ အဆက်အသွယ် မရှိတာ ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ အနေဝေးနေတဲ့ ချစ်သူတွေအနေနဲ့ သွေးမအေးသွားရအောင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အဆက်သွယ်တွေ အမြဲလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ့်လို့ အဆက်အသွယ်တွေနည်းပါးခဲ့မယ်ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဝေးကွာသွားစေပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိတော့ပဲ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ တစ်ခန်းရပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနေဝေးသူတွေအနေနဲ့ အဆက်အသွယ်များများလုပ်ပါ။ (၂) အယုံအကြည်ကင်းမဲ့စ ပြုလာတယ် […]
ဒီလိုအကျင့်တွေရှိရင် အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး ဖြစ်ဖို့ သေချာပြီ
ဒီလိုအကျင့်တွေရှိရင် အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး ဖြစ်ဖို့ သေချာပြီ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံး အဖော်မွန် ဖြစ်လာမယ့် တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ဘဝထဲ ဝင်လာနိုင်ဖို့ အခုပဲ လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ရအောင်နော် Single လေးတို့ရေ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူ ကိုယ်ကချစ်နေရတဲ့သူနဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ဖန်တီးရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ရဲ့ အနောက်မှာ ထောက်ကန်ပေးထားမယ့်သူ ကိုယ့်ရဲ့ ဘေးမှာ ဖေးမပေးထားမယ့်သူ မရှိတဲ့ တစ်ယောက်တည်း ဘဝဟာ အမှီအခိုကင်းမဲ့တဲ့ ဘဝမို့ စိတ်ကျေနပ်စရာပါလို့ ထင်ရနိုင်ပေမယ့်လည်းအဖော်မဲ့တဲ့ ဘဝတစ်ခုမို့ ဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာတွေကို အပြည့်အဝ မခံစားရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ချို့အမူအကျင့်တွေကြောင့် ဘဝမှာ လက်တွဲဖော်ရှာမရဘဲ တစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Marry ရဲ့ Single လေးတို့ရော ဒီလို […]
ဖောက်ပြန်မယ်ကြံတိုင်း လက်ရှိချစ်သူကိုသတိရပါ.… ဆန္ဒကို သိက္ခာတရားနဲ့ထိန်းပါ…ဖောက်ပြန်တော့မယ်ကြံတိုင်း လက်ရှိချစ်သူကို သတိရပါ…ဖောက်ပြန်တော့မယ်ကြံတိုင်း လက်ရှိအိမ်ထောင်ရေးကို သတိရပါ ဖောက်ပြန်တော့မယ်ကြံတိုင်း လက်ရှိသားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကို တွေးပါ။ ဖောက်ပြန်တော့မယ်ကြံတိုင်း ကိုယ့်ကို အားကိုးနေတဲ့ဇနီးမယား ခင်ပွန်း မျက်နှာကို မြင်ယောင်ပေးပါ။ဖုန်းတွေပေါလာတဲ့ခေတ်မှာ အပျို အအို ဆိုက်စုံ ဂိုက်စုံအင်တာနက်ပေါ် တတ်လာကြတယ်။effectတွေသုံးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ ဘယ်ကဘယ်သူ ဘာလုပ်တယ် ဆိုတဲ့ မသေချာမရေရာတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်ကလူတွေနဲ့သာယာပြီး လက်ရှိအိမ်ထောင်ရေးကိုပျက်စီးအောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဘယ်သူ ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်းဘယ်သူဘယ်လောက် ချောချော ကိုယ့်ရဲ့ငယ်လင် ငယ်မယားလောက်ဘယ်သူမှမချောနိူင် မကောင်းနိူင်ပါဘူး။မယားငယ် လင်ငယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ ငယ်လင် ငယ်မယားလောက် ကောင်းနိူင်ပါ့မလား။အင်တာနက်ကနေ တွေ့တဲ့လူတွေကိုယုံပြီး လက်ရှိအိမ်ထောင်ရေးကိုဖျတ်စီးပြီး အင်တာနက်ကတွေ့တဲ့လူဆီကိုသွားမလို့လား တန် လို့လား? မြို့လယ်ခေါင်က အများသုံး သန့်စင်ခန်းဆိုတာ လူတကာ လာရောက်ပြီး အညစ်အကြေးတွေ စွန့်တဲ့နေရာပါ။တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး […]
ကိုယ်နဲ့ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တွက်ကြည့်လို့ရပါပြီနော်
ကိုယ်နဲ့ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တွက်ကြည့်လို့ရတဲ့နည်း မိန်းကလေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ယောကျ်ားလေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ..ကိုယ်နဲ့ နဖူးစာ ပါ၊ မပါ တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေး ဟာ နာမည်ကျော် ဗေဒင် ဆရာ စံဇာဏီဘို ရဲ့ တွက်ချက်နည်း ၊ နည်းလမ်းလေး နဲ့ အကျိုးဆက်ကို ရယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ရဲ့ မွေးနေ့သက္ကရာဇ်အားလုံးပေါင်းကြည့် ၊နောက်ဆုံး ရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ…..သင္က 23.4.1991 သင့်ချစ်သူက 14.7.1992 သင့်မွေးနေ့ + သင့်ချစ်သူမွေးနေ့ = အဖြေ 23 +4+ 1991 + 14 +7[…]
ဘဝ လက် တွဲ ဖော် အ စစ် ဆို တာ
ကိုယ့် ဘ ဝ ထဲ ကို သူ ဝင် လာ တာ ရှိ သ လို သူ့ ဘ ဝ ထဲ ကို ကိုယ် ဝင် သွား တာ မျိုး လဲ ရှိ တယ် ၊ တစ် ခါ တစ် လေ ကျ တော့ သူ က မ ပျော် တော့ လို့ ထွက် သွား တတ် သ လို ကိုယ် က လဲ မ ပျော် တော့ လို့ ဆို ပြီး ပြန် လှည့် ထွက် […]
ဘယ်အရွယ်ရောက်ရင် အချစ်စစ် နဲ့ တွေ့မှာလဲ ကြည့်လိုက်တော့
ဘယ်အရွယ်ရောက်ရင် အချစ်စစ် နဲ့ တွေ့မှာလဲ ကြည့်လိုက်တော့ချစ်ရတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်ထက်မက တွေ့ရကောင်း တွေ့ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် တစ်ကယ်စစ်မှန်တဲ့ ချစ်သူကိုတော့ ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့ရမလဲဆိုတာ ဘယ်အရွယ်ရောက်ရင် အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့မှာလဲ အခ်စ္စစ္ ဆိုတာ လူတိုင်းလိုချင်ကြတဲ့ အရာပါ လူတိုင်းလူတိုင်း မက်မောကြပေမယ့် လက်တွေ့ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဘဝတစ်သက်တာမှာ ချစ်ရတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်ထက်မက တွေ့ရကောင်း တွေ့ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် တစ်ကယ်စစ်မှန်တဲ့ ချစ်သူကိုတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ တွေ့ရမလဲဆိုတာ မသေချာတဲ့အရာပါ။ Marry ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ ဘယ်အချိန်မှာ အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့ရမလဲ ဆိုတဲ့ အချစ်ဗေဒင်လေး တွက်ပေးချင်ပါတယ်။ အချစ်ဗေဒင်လေး တွက်ပေးချင်ပါတယ် မိဿရာသီဖွား – မတ်(၂၁)မှ ဧပြီ(၂၀) […]
13th August 2020 Editor
တကယ်လို့ သင်က သင့်ချစ်သူကောင်မလေးကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်ဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားလေးတွေ ပြောပေးတာလောက် သူမကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေနိုင်တာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စာလေးတကြောင်းက သူမကိုချက်ချင်းပြုံးပျော်သွားစေမှာသေချာပါတယ်။ ကဲဒါဆို ဘယ်လိုချစ်စကားလေးတွေပြောလို့ရလဲ အခုပဲကြည့်ရအောင်။ (၁) ချစ်သူကောင်မလေးကို လှတယ်လို့ပြောပါ Source : APKPure.com မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးလို့ သင့်ချစ်သူကောင်မလေးကို မက်ဆေ့ချ်ပို့တဲ့အခါ “အရမ်းလှတဲ့ကောင်မလေးရေ ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ”ဆိုတဲ့စာလေးပို့လိုက်ရင် သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ပျော်စရာမနက်ခင်းလေးတခုဖြစ်စေမှာသေချာပါတယ်။ (၂) မှော်ဆန်တဲ့စကား၃လုံးပြောပါ Source : Verywell Mind ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီ “I Love You”မှော်ဆန်တဲ့စကားလုံး၃လုံးက သင်သူမကိုခန,ခနပြောဖူးနေကြဖြစ်ပေမယ့်လို့ ပြောတိုင်း သူမကိုအမြဲပျော်ရွှင်စေမှာသေချာပါတယ်။ (၃) သတိရတယ်လို့ပြောပါ Source : Freepik သင်ချစ်ရတဲ့သူက သင့်ကိုအရမ်းသတိရတယ်လို့ပြောရင် သင်ဘယ်လိုနေမလဲ? ဒီစာလေးက သင့်ကိုအမြဲပျော်စေမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးကို သတိရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါ သူမအနေနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးပျော်ရွှင်ရမှာသေချာပါတယ်။ (၄) ချစ်သူကောင်မလေးကို […]